Samy vehivavy sy mandeha ny sivana
2010-03-09 @ 00:06 in Andavanandro
Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tokoa ny andron'ny alatsinainy 8 marsa 2010. Tsaroana tokoa fa tsy nisy loatra ny fotoana nahafahana nankalaza azy ity tamin'ny herintaona noho ny toe-draharaha tao anatin'ny hafanana politika indrindra. Efa niseho tamin'ny fikomiany manko ny miaramilan'ny Capsat tamin'izany fotoana izany. Fa toe-javatra hafa kosa no niseho tamin'ity taona ity fa dia nomarihina manokana tokoa ilay andron'ny 8 marsa.
Samy nankalaza ny andron'ny vehivavy amin'izay heveriny ho mety ny vehivavy, samy nanomana mangina ihany koa noho izany ny mpandray anjara rehetra na avy aiza na avy aiza, na ny ankolafy avy aiza na avy aiza. Eto no ahatsapan'ny mpanoratra fa toa tafavoaka tao anatin'ny hafanan'ny tolona izy fa difotry ny asa fanaony isan'andro. Tsy nahamarika, na tsy naheno loatra ny mpanoratra fa mety ho variana fa hay nanomana fambolen-kazo indray ny vehivavy mpandala ny ara-dalàna tamin'io andro io. Ny hitany kosa dia ny fiomanana teo amin'ny kianjan'ny Malacam hatry ny andron'ny zoma.
Teo amin'ny kianjan'ny Malacam no nanomanan'ny eo amin'ny fitondrana ny Andron'ny vehivavy. Ny zoma maraina dia efa nitsidika ny toerana ireo nampiandraiketina hikarakara ny toerana. Tamin'io andro io dia efa notaterina tsikelikely ny fitaovana sy ny fanaka rehetra ho amin'izany. Nanomboka teo ihany koa dia noravahana fefy gony fotsy mangatsakatsaka ny sisin'ny kianja rehetra sy ny manoloana ny fidirana (tsy mbola ilay vavahady fa fidirana amin'ilay tsena izay nofoanana aloha nanomboka io andro io) hizotra mankany amin'io kianja io. Nasiana jiro be mampahajambena maso mihitsy moa io malaza ho "couloir de la mort" io hany ka mazava dia mazava aoka izany ny lalan-tongotra eo raha mitsapatsapa lalana no mahazatra ny mpandalo eo.
Teo amin'ny fikarakarana dia nandalo teo avokoa na mpiasan'ny kaominina, na mpiandraikitra ny prezidansa FAT, na ny mpamonjy voina (trano may) hanadio ny toerana ary indrindra indrindra ny miaramila izay nisahana sahady ny fiambenana ilay toerana. Tsy nahazo nivarotra intsony ireo mpivarotra teo amin'ity tsenakely ity, nanomboka ny alahady indrindra indrindra. Tsy nisy intsony koa noho izany ny lalao baolina lavalava izay fahita amin'ity toerana ity rehefa faran'ny herinandro. Mazava ho azy raha mety ho liana hijery ny fety hitranga ao ny manodidina mahita ilay fihetsiketsehana rehetra teo am-piomanana.
Rehefa tonga ny andro lehibe dia vory ihany ny olona fa tsy tena betsaka, petsa dia petsa ny sisin'ny kianja, izany hoe izay tsy nisy bozaka ary namotaka aoka izany. Vao nisy orana indrindra manko ny folakandron'ny alahady ka tsy maina intsony izany rehefa tonga ny alatsinainy. Vory lanona avokoa ny solontenan'ny vehivavy avy any amin'ny faritra rehetra, samy nanomana ho amin'ny fanamiana hanaovana filaharana ao anatin'ny kianja ihany. Filaharana izany no tena nanamarika ny tontolo andro marainan'ny Malacam, ka teo ny avy any amin'ny isam-paritra, nisy ihany koa anefa ny solontenan'ny antoko politika nilahatra ary tsy diso anjara ny vady miaramila.
Mba mihira ihany ny mpanakanto fa toa tsy dia noraharahian'ny mpampita mivantana izany. Angamba ny tena tanjona dia ny hanasohasoana ireo vehivavy mpitondra sy ny vadin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Tsy ny teny amin'ny sehatra loatra manko no narahina fa tany amin'izay nandehanan-dramatoa vadin'ny filohan'ny FAT. Nisy aza moa notapahina na naato ny hiran'ny mpanakanto fa ny tenina vehivavy manazava ny fahandroan-tsakafo amin'ny alalan'ny vilany-sahafabe maka ny tara-masoandro no natao. Ramatoa kosa tsy dia niteny na nampiresaka, na nihaino izay mety holazain'ny mpitana ny tranoheva fa dia miaraba sy miserana fotsiny, fomba fifanajana e!
Notapahina ny lalana
Ny tsy nampoizina tamin'ity teny amin'ny kianjan'ny Malacam ity dia ny fanapahana ny lalana manomboka eo amin'ny fivilian-dalana mankany amin'ny rond-point Antanimena manoloana an'i sekoly Sully teo aloha (toa tsy sekoly intsony izy io manko) ka ny fiara rehetra avy any Behoririka dia avily mankany amin'iny manoloana ny NIAG izany hoe ny manoloana iny Ultima media iny; mihodina amin'ny rond-point vao mivily mankany amin'ny lalana anoloan'ny falda na impimerie catholique, na mandeha mandalo amin'ilay manoloana ny CEG Antanimena sy ny sekoly Saint François Xavier iny.
Taoriana tokony ho atsasak'adiny taorian'ny nanapahana ny avy any Behoririka io dia notapahina koa ny lalana avy aty Antanimena ho any Soarano na Behoririka. Tsy maintsy nivily mizotra mankany amin'ny edisiona takariva taloha iny na ny manaraka azy ny fiara rehetra fa tsy mahazo manitsy amin'ny arabe mahazatra. Dia eo amin'ny fakana solika (Shell io raha tsy diso aho) indray vao mipoitra ny fiara rehetra. Tsy nisy nanampo loatra io fanapahan-dalana io ny ankamaroan'ny mpandeha fiara hany ka nitohana izaitsizy ny lalana. Raha nanomboka tamin'ny valo ora maraina izany fanapahan-dalana izany dia tsy naverina tamin'ny laoniny raha tsy tamin'ny 12 ora sy sasany tany ho any, izany hoe efa lasa antsasak'adiny ireo manampahefana rehetra.
Magro mankany Ambatomanga
Efa notsoriko fa na izaho izay manoratra aza dia tsy nahalala akory ity fiomanana iray hafa ity hany ka talanjoona raha nahita ny fahavorian'ny olona, indrindra fa ny vehivavy, tamin'ny alalan'ny sary hita an-tserasera ihany. Tonga tany am-piasana maraina no nanontanian'ny olona hoe angaha tsy nandeha nankany Ambatomanga vao gaga hoe hay ve nisy izany fambolen-kazo niarahan'ny vehivavy izany. Tsy kely ihany koa ny fiomanana tamin'ity satria fiara sy fiarabe ampolony maro no nitanjozotra namonjy ny toerana nokasaina hanaovana izany. Mazava ho azy fa tsy maintsy nofaina avokoa ireo fiara fitaterana rehetra ireo.
Zavatra iray voamarika dia ny fahavonon'ny olona nandeha, nisy aza moa ny fivarotana teto an-tanàna no nikatona fa nandeha tamin'io fambolen-kazo io ry zareo. Amin'ny andro "tsotra" izany hoe rehefa eo amin'ny magro anefa dia tsy mandeha eny loatra ry zareo. Midika izany fa misy hatrany ny olona no miandry toe-javatra fotsiny dia tsy ampoizina ny ho fihetsehan'ny olona. Na dia noheverina ho fiarahan'ny ankolafy telo aza moa ny fotoana dia nanjakazaka aoka izany ny ankolafy Ravalomanana. Misy anefa ireo vehivavy no tsy mazoto loatra amin'izany fiarahan'ankolafy telo izany ka nijanona tany an-tokatranony ihany. Mahery fo tokoa ny vehivavy!
Samy niomana fatratra tamin'ny fanamarihana ity andro ity izany ny ankamaroan'ny vehivavy teto Antananarivo, tao ny nanao filaharana tanaty kianja ho fanehoana ny mahafety ny andro; tao ihany koa ny nanokana azy ho andro hanasoavana ny tanindrazana sady adidy eo amin'ny firenena rahateo izany.
Araka ny voamariky ny eto an-drenivohitra dia tapaka tampoka ny radio fahazavana nanomboka tamin'ny 11 ora atoandro teo, rehefa handeha iny ny vaovao tapatapany. Ny ao amin'ny serasera mpandray antso no nilaza fa noho ny resaka fahatapahan'ny herinaratra no nahatonga io fahatapahana io ka tsy ho voaverina amin'io andron'ny 8 marsa io ny fandaharana raha ny fijery azy. Rehefa tsy azo teo amin'ny fanapahana ny onjam-peo mivantana izany ny radio dia tany amin'ny herinaratra indray no namelezana azy. Dia nangina tokoany tontolo aloha.
Ny nahatalanjona ny maro ihany koa dia ny tsy nanipazan'ny MaTV hany mampita izay vaovaon'ny Ankolafy telo amin'izao fotoana na dia indraim-bava aza ny fambolen-kazo natao tany Ambatomanga iny. Manahy dia manahy aho fa mety ho toy izany ihany koa no hitranga amin'ny gazety an-tsoratra raha izay zava-misy tamin'ity herinandro ity izay no jerena. Tsy hisy na dia gazety iray aza ve hitatitra ny fambolen-kazo teny Ambatomanga, izany hoe hampiseho ny hamaroana na havitsian'ny olona nandeha? Betsaka ihany manko ireo nolazaina ho mpanao gazety, sady nahazo fiara manokana izy ireo, no nandeha fa ny eo amin'ny fitateram-baovao sisa no hojerena izay hataony. Satria manko mety ho herinandro mangotraka ity herinandro ity dia ezahina ny hampangina izay mety hahazo hery hanozongozona ny fitondrana hmpifanaritaka ny tolona. Tsy dia ho voan'izany loatra anefa ny mpitolona raha jerena izay nitranga ny alatsinainy izay. Miatrika ady mangatsiaka faran'izay mamifirify indray ny eto an-toerana fa asa aloha raha tsapan'ny maro izany na tsia?
Ps: fa maninona i Jentilisa no tsy miarahaba ny vehivavy? Ka ny fomba hitako amin'ny haino amanjery dia ny vehivavy ihany no tena miarahaba ny vehivavy koa! Jereo fa ny vadin'ny filoha no miarahaba ny vehivavy fa tsy ny filoha. Matoa ny lehilahy miarahaba ny vehivavy dia mitady oroka ny ankamaroany izay, fa mety hisy ihany ny "exception" an!
Jentilisa, 09 marsa 2010, amin'ny 02:11